घुम्तीमा मोडिन नसक्दा मलामी बोकेको बस खस्यो ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारघुम्तीमा मोडिन नसक्दा मलामी बोकेको बस खस्यो !
घुम्तीमा मोडिन नसक्दा मलामी बोकेको बस खस्यो !
रूपन्देही । बुटवलबाट गुल्मीको रिडी जाँदै गरेको मलामी चढेको बस दुर्घ’टना हुँदा नि’धन हुनेको संख्या ८ पुगेको छ। आइतबार बुटवलको रानीगञ्जका ७० वर्षीय वीरबहादुर विश्वकर्माको मलामी सवार लु.२ख ७२७९ नम्बरको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका-२ लगुवामा दुर्घ’टनामा परेको थियो ।
दुर्घ’टनामा परी ७ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा ज्या’न गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । बुटवल रानीगञ्ज निवासी ७० वर्षीय वीर बहादुर विश्वकर्माको शनिबार नि’धन भएको र उनको श-व लिएर मलामी गएका ३६ जना बसमा चढेका छिमेकी प्रदीप आचार्यले बताए । उनी अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका कुभिण्डेबाट बुटवल आएर बसेका थिए ।
दुर्घ’टनामा परी ज्या’न जा’नेको सनाखत हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । सडक चिप्लो हुँदा सडकबाट करिब ७० मिटर तल बस ख’सेको बताइएको छ । बसमा ३५ सवार थिए । घुम्तीमा बस मोडिन नसक्दा ७० मिटर तल ख’सेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको डीएसपी त्वातीले जानकारी दिए ।